Nagu saabsan - Dongguan Weldo saxitaanka machining Co., Ltd.
Dongguan Weldo saxsanaanta machining Co., Ltd. waa soo saare shahaado ka haysta ISO 9001, oo la aasaasay 2008. Tan iyo aasaaskeedii, waxay ahayd 13 sano, waxaan u hogaansameynay aaminaadda shirkadda bilowgii aasaasida, teknolojiyad heer sare ah, macmiil marka hore.
Waxaan nahay shirkad wax soosaara lagu kalsoonaan karo oo arimahan ku jira. Waxaan ku dhidibnay sumcad aan fiicnayn oo ku saabsan kormeerka tayada, adeegga macaamiisha, dayactirka ka dib iyo adeegsiga, iyo qalabka ugu horumarsan, kaasoo aasaas adag u dhigay macaamiishayada ereyga-afka.
Saldhigga wax soo saarku wuxuu ku yaalaa Dongguan, oo ah magaalo caan ku ah warshadaha adduunka. Dongguan waa mid ka mid ah saldhigyada wax soo saar ee ugu weyn adduunka iyada oo leh xoog soo saar xoog leh iyo nidaam warshadeed oo dhameystiran. Shirkaddayadu waxay leedahay wax ka badan 6000 mitir murabac oo dhir ah, oo ku takhasusay adeegyada mashiinnada saxda ah ee CNC iyo OEM, adeegyada xubnaha qaybaha ODM.
Qalabka wax lagu farsameeyo waxaa ku jira daraasiin xarumo farsamo oo sax ah oo loo yaqaan 'CNC machining centres', lathes-ka CNC, lathes, mashiinada wax shiida, mashiinada wax shiida, goynta siligga, iwm.
Macaamiishayadu waxay ku yaalliin Aasiya, Waqooyiga Ameerika iyo Yurub. Waxaa naga go'an inaan soo saarno oo aan siino qaybo tayo sare leh oo tayo sare leh oo loogu talagalay macaamiisha adduunka oo idil. Wax soo saarka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa caafimaadka, semiconductor, mashiinada iyo warshadaha kale.
Waxaan leenahay koox hibooyin hogaamineysa kuwaas oo ku xeel dheer aqoonta xirfadeed ee mashiinada saxda ah iyo qalabka, isla markaana u horseeda shaqaalaha farsamada si ay u bartaan xirfadaha dalabka, una maareeyaan shirkada si cilmiyaysan, taas oo ku jirta horumar dhawaaq ah.
Waxaan leenahay koox xirfadlayaal injineernimo ah iyo shaqaale farsamo khibrad leh, waxaan had iyo jeer ka codsaneynaa shaqaalaha farsamada inay lahaadaan habab sare oo farsamo ayna adeegsadaan tiknoolajiyad adag oo adag si loo gaaro natiijooyin wanaagsan. Iyada oo dhammaan tamartayada iyo xamaasadeena, waxaan diirada saareynaa inaan macaamiisha siino alaab tayo sare leh oo tayo sare leh, oo aan noqono lamaanahaaga ugu kalsoonida badan. Waxaan rajeyneynaa latashigaaga.
Nidaam tayo wanaagsan leh oo la isku halleyn karo, istaageyn heer sare ah iyo taageero macaamiil oo qumman, taxanaha wax soo saarka iyo xalalka ay soo saarto ururkeenna ayaa loo dhoofiyaa dalal iyo gobollo aad u tiro yar Una hoggaansamaya mabaadi'da ganacsi ee waxtarka labada dhinac, waxaan ku guuleysanay sumcad wanaagsan dhexdeeda macaamiisheena adeegyadayada kaamil ah, wax soo saarka tayada leh iyo qiimaha tartanka. Waxaan si diiran u soo dhawaynaynaa macaamiisha dal iyo dibadba inay nagala shaqeeyaan guusha guud.
Waxaan rajeyneynaa inaan dhisi karno wada shaqeyn muddo dheer ah dhammaan macaamiisha, waxaana rajeyneynaa inaan horumarin karno tartanka oo aan ku guuleysan karno xaaladda guule-wadareedka macaamiisha. Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweynaynaa macaamiisha ka kala socda daafaha dunida si ay noola soo xiriiraan wixii aad rabto! Kusoo dhawow dhamaan macaamiisha dal iyo dibadba inay soo booqdaan warshaddeena. Waxaan rajeyneynaa inaan xiriir wada-guuleysi oo guuleysi ah idinla yeelanno, oo aan berri ka sii wanaagsan abuurno.